I-Kameleoon: Injini ye-AI yokuXela kwangaphambili ukuGuqulwa kwabaTyeleli | Martech Zone
I-Kameleoon liqonga elinye le Ukuguqulwa kwenqanaba lokuguqula (CRO) kuvavanyo lwe-A / B kunye nokwenza ukuba ulwenziwo lwexesha elililo kusetyenziswa ubukrelekrele bokuzenzela. Ubuchule bokufunda ngomatshini kaKameleoon bubala amathuba okuguqula undwendwe ngalunye (oluchongiweyo okanye olungaziwayo, umthengi okanye ithemba) ngexesha lokwenyani, ukuqikelela ukuthengwa kwabo okanye injongo yokuzibandakanya.
Uvavanyo lweKameleoon kunye neQonga lobuqu
I-Kameleoon yiwebhu enamandla kwaye igcwele Uvavanyo kwaye Ngokwezifiso iqonga labanini bemveliso yedijithali kunye nabathengisi abafuna ukonyusa ukuguqulwa kunye nokuqhuba ngokukhula kwemali ebonakalayo kwi-Intanethi. Ngeempawu kubandakanya ukuvavanywa kwe-A / B, ukwahlulwa kwabasebenzisi, ukujolisa ekuziphatheni kunye nedatha yexesha lokwenyani, uKameleoon unceda amashishini ukuba anyuse ukuguqulwa kwi-Intanethi kunye nokwandisa ingeniso.
I-Forrester yenze udliwanondlebe olunzulu kunye nabathengi abaninzi beKameleoon kuwo onke amashishini kubandakanya i-e-commerce, ezokuhamba, ezemoto kunye nokuthengisa malunga neziphumo zabo eziqikelelweyo.
Izibonelelo zeKameleoon ezichongiweyo kwisithuba seminyaka emithathu zibandakanya:
Ixhomekeke ku Ukuphuculwa kwe-15% kumanqanaba okuguqula ngokwenza amava ewebhu abatyeleli kunye nokunxibelelana nabanye abantu ekuphuculeni uguquko. Oku kubonisa isibonelelo seminyaka emithathu esihlengahlengiso somngcipheko se- $ 5,056,364 kwixabiso langoku.
Ixhomekeke ku Ukunyuka kwama-30% kwintengiselwano yokuthengisa, kunye nohlalutyo lokuziphatha kunye nokusekwa kwimeko kaKameleoon okwenza ukuba iimveliso zonyuse inani lemikhankaso yokuthengisa ngempumelelo. Oku kubonisa isibonelelo seminyaka emithathu esihlengahlengisiweyo somngcipheko se- $ 577,728.
Ukuncitshiswa kwe-49% kwimizamo yokuseta iphulo. Amandla okwenza ngokwezifiso ze-AI-amandla ka-Kameleoon kunye nolwabiwo olunamandla lwezithuthi zewebhu kuguquko lweebhakethi zinciphisa kakhulu ixesha elifunekayo lokuseta amaphulo kunye nokuyila amava ewebhu kunye nonxibelelwano, ngelixa kusonyusa ukuzimela kwabathengisi ngonxibelelwano olunomdla nolusebenzisekayo. Oku kubonisa isibonelelo se- $ 157,898 ngexabiso langoku ngaphezulu kweminyaka emithathu.
Ukongeza, abathengi bachonge ezi zibonelelo zilandelayo:
Ukuphuculwa kwamava abaThengi (CX) -Ngokunika ukuhanjiswa komxholo ofanelekileyo kunye nemiyalezo, uKameleoon uvumela imibutho ukuba ibonelele ngamava afanelekileyo, awenzelwe wena.
Ukwanda kwamava omSebenzi (i-EX) -Abasebenzisi baziva bexhotyiswe ngakumbi njengoko banokwenza utshintsho olulula kunye nohlengahlengiso kwimicimbi yemizuzu, kungoko baziva besebenza ngakumbi kwaye bomelele- kwaye benamandla ngakumbi emsebenzini wabo.
Ukuhambisa amava elungiselelwe, amava edijithali ngoku kungumbindi kwimpumelelo yeshishini- ngesifo esonyusa isidingo semveliso ukuze kugxilwe kulingo kunye nokwenza ubuqu. Olu phononongo kunye nohlalutyo lukaForrester lubonisa indlela amandla kunye nokusetyenziswa ngokulula kweKameleoon abaxhasa ngayo abathengi beshishini kwilizwe elikhuphisanayo, kwihlabathi lokuqala ledijithali, ehambisa i-ROI ekhawulezayo kunye nezibonelelo zexesha elide ezemali. ”
UJean-René Boidron, u-CEO, uKameleoon
Ngaphambi kokusebenzisa i-Kameleoon, imibutho yabathengi babengenazo kwaphela izinto zokusebenzisa umntu okanye basebenzise amaqonga ovavanyo lwe-A / B awayengenazo iinjini zokuqikelela kunye nokufumana amanqaku. Baziva ngathi baswele amandla okunyusa amaqondo okuguqula ngokwenza ukuba uyilo lwamava ekujoliswe kuwo.
Ngaphezulu kweenkampani ezinkulu ezingama-450 zixhomekeke kuKameleoon, ezenza ukuba ibe liqonga le-SaaS ephezulu yokwenza ubuqu obuqhutywa yi-AI eYurophu. Oku kubandakanya iinkokheli kwi-ecommerce nakwiivenkile (iLidl, Cdiscount, Papier), imithombo yeendaba (Mumsnet, L'Equipe, Axel Springer), uhambo (SNCF, Campanile, Accor), imoto (iToyota, iRenault, iKia), iinkonzo zemali (Axa, I-AG2R, iActric Agricole) kunye nezempilo (Providence). I-Kameleoon ifezekisa ukukhula kwamanani amathathu ngonyaka kubathengi nakwingeniso.
Cela iDemo yeDemo
tags: vavanyoaiUbuqu obuqhutywa yi-aiIcandelo eliqhutywa yi-aiUhlalutyokukubhadla okungeyonyaniamathuba okuguqulaikratshikameleoonIifayileNgokwezifisospark